Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Nepal » Misokatra indray ve ny fahatairana iray amin'ny Andro manerantany ho an'ny fizahan-tany any Nepal?
Travel Travel • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • culinary • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Nepal • Vaovao • People • malaza ankehitriny • WTN
Mpanoratra Scott Mac Lennan
Andro fitsangatsanganana eran-tany Namaste 2021! Ho an'i Nepal dia mety hidika izany fa handray vahiny vahiny tsy ho ela ny hotely. Nepal dia afaka haneho ny velarany malalaka, ny farihy, ny tendrombohitra ary ny nahandro ho an'ireo mpizahatany mitady ny fahalalahana hiparitaka mba hankafy ny toerana mahatalanjona atolotray an'ity tontolo ity.
Ireo mpitarika fizahan-tany tsara laza any Nepal dia manantena ny hisokafan'ny firenena Himalaya ho fizahan-tany.
Ny fetin'ny fizahan-tany manerantany any Nepal dia tsy ho virtoaly fotsiny fa ho fankalazana ara-batana any amin'ny firenena izay antenaina haneno lakolosy hisokatra indray ho an'ireo mpitsidika.
Volana mihidy am-bolana maro, vonona handray ireo mpitsidika amin'ny sandriny malalaka i Nepal.
Mety misy ny antony nanapa-kevitra ny Governemanta Nepal hankalaza ara-batana ny Andro maneran-tany ho an'ny fizahan-tany any Nepal.
Raha misy firenena eto amin'izao tontolo izao izay tsy olana ny fanalavirana ny fiaraha-monina dia i Nepal izany. Ny governemanta Nepal dia nanidy ny firenena hanidy mandritra ny volana maro mba hisorohana ny fihanaky ny Coronavirus. Tamin'ny fiandohan'ny areti-mandringana Nepal dia hita fa maodely ho an'izao tontolo izao amin'ny fiarovana ny mpizahatany.
Niomana amin'ny famoahana indray ireo mpitarika fizahan-tany eo an-toerana. Tamin'ny fivoriana roa herinandro lasa izay, ny Tale jeneralin'ny birao fizahan-tany any Nepal, Deepak Raj Joshi dia nanapa-kevitra ny hangataka amin'ny governemanta mba hanesorana ireo fepetra takina amin'ny quarantine ho an'ireo mpandeha vaksiny mba hampirisihana ny fizahantany any Nepal.
Nasongadiny fa vita vaksiny ny mpiasan'ny fizahantany voalohany, ary mijoro ny hevitry ny vondrona fa tokony hambaran'ny Governemanta Nepal ny sehatry ny fizahan-tany.
Tambajotra fizahan-tany manerantany Ny filoham-pirenena Juergen Steinmetz dia mpikabary tamin'ny hetsika vao haingana nataon'ny mpitondra fizahan-tany Nepal ary niresaka momba ny dingana manaraka amin'ny fanokafana ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany any amin'ny faritra Himalaya any Nepal, Bhutan, India, ary Tibet.
Deepak Raj Joshi no mitarika ny Himalayan Mahaliana Group ho an'ny World Network Network.
Roa herinandro lasa izay, ny vondrona dia nitaky ny hamerenana visa rehefa tonga sy fampiroboroboana ny fitsapana PCR ao amin'ny seranam-piaramanidina.
Raha ny faritra Nepal dia vao haingana ovoasazy noho ny fetra sasany, toy ny efitrano sinema sy trano fisakafoanana manana fahafaha-manana 50%, saingy efa nisy tsy misy fanavaozana ny fameperana ny dia ataon'i Nepal ao anatin'ny enim-bolana.
Andro fizahan-tany eran-tany 2021, hankalazaina ara-batana any Nepal.
Ny minisitry ny kolontsaina, fizahan-tany ary fiaramanidina Nepal dia nanambara fa amin'ny 27 septambra dia hisy fankalazana lehibe hatao amin'ny sarontava sy ny halaviran'ny fiaraha-monina.
Ny lohahevitra ho an'ny Andro maneran-tany fizahan-tany amin'ity taona ity dia ny ”fizahan-tany ho an'ny fitomboana. ”
Antenaina fa io lohahevitra io dia hanampy amin'ny fampiroboroboana ny fahatakarana bebe kokoa ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra UN. Fandaharana ofisialy iray no karakaraina ao amin'ny efitrano malalaky ny Birao fizahan-tany any Nepal.
Lahatsary nalain'i Scott MacLennan, eTN Nepal
Tsy mbola misy ny fanavaozana ofisialy ny satan'ny fisokafan'ny fizahan-tany any Nepal, fa loharanom-baovao tsara avy amin'i eTurboNews antenaina fa ho avy tsy ho ela ity fanambarana ity.
Ny fahatongavan'ireo mpitsidika vita vaksiny tanteraka any Nepal dia antenaina avela ho an'ny olom-pirenena avy amin'ny firenena maro. Ny quarantine ho an'ny mpitsidika toy izany dia tsy ho takiana intsony.
Scott MacLennan, eTurboNews mpanao gazety any Nepal dia nilaza hoe: Ity dia fomba tsara hankalazana ny Andro maneran-tany fizahan-tany.
Ny fampahalalana bebe kokoa momba ny fizahantany Nepal dia hita ao amin'ny www.welcomenepal.com
Scott MacLennan dia mpanao gazety mpanao gazety miasa any Nepal.
Ny asako dia nipoitra tao amin'ireto tranonkala manaraka ireto na amin'ny fanontana pirinty mifandraika amin'ireo tranokala ireo. Manana traikefa mihoatra ny 40 taona amin'ny sary, sarimihetsika ary famokarana feo aho.
Ny studio-ko any Nepal, Her Farm Films, no studio manana fitaovana tsara indrindra ary afaka mamokatra izay tianao ho an'ny sary, horonan-tsary ary raki-peo ary ny mpiasa rehetra ao amin'ny Her Farm Films dia vehivavy nofanofiko.